News Collection: साँचो माया काँचो माया
साँचो माया काँचो माया
म.र नितेश सहपाठी थियौं । 'एकदिन अचानक नितेशले 'आइ लभ यु रिया' ' म तिमीबिना बाँच्न सक्दिन' भन्यो । उसको यो वाक्यले मलाई कुनै कुरा सोच्ने मौकै दिएन । उसका सामु म लुली भएँ । यति राम्रो युवकले माया गर्नुभन्दा ठूलो सौभाग्य मेरा लागि के होला ? मलाई संसार जितेको अनुभव भयो । मैले उसलाई आँखामा सजाएँ । मेरो आँखामा उसको रूपभन्दा सुन्दर केही भएन । मलाई एकान्त मन पर्न थाल्यो । किताब-कापी पल्टाउन मन लागेन । आमा-बाले भनेका कुरा सुन्न मन लागेन । कोठाभित्र पसेपछि उसको तस्बिर साथी बन्यो ।
हामी विवाह गर्ने निर्णयमा पुग्यौं । म आमा-बाकी एक्ली छोरी । यो कुरा मैले आमा-बासामु पुर्‍याएँ । मलाई राम्रो शिक्षा दिई आत्मनिर्भर बनाउने उहाँहरूको सपना थियो । हाइस्कुल पास गरेर भर्खर इन्टर पहिलो वर्षमा पढिरहेको अवस्थामा यसरी विवाह बन्धनमा बाँधिने मेरो प्रस्ताव उहाँहरूले सुन्न पनि चाहनुभएन । उहाँहरूले घोर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो । म उहाँहरूको व्यवहारप्रति आक्रामक बनें, 'म अब ठूली भैसकें मलाई आमा-बाको आवश्यकता छैन । मेरो जीवनको निर्णय म आफै लिन्छु ।
आमा-बा संलग्न नभए पनि हाम्रो विवाह हुनसक्छ' भन्दै आवेशमा मैले उहाँहरूको अपमान गरें । म नितेशका साथ भागेर पोखरा पुगें ।
हामी दुई हप्ता पोखरा बस्यौं । त्यसपछि दुलहीका रूपमा म नितेशको घरमा भित्रिएँ । नितेशको परिवार मसँग खुसी थियो तर नितेशले मसँग नचाहिने निहँँु खोजेर बारम्बार झगडा गर्न थाल्यो । ऊ कुनै दिन त बाहिर काम छ भनी घरै आउँदैनथ्यो । भनेजस्तो खान, लाउन र मोजमज्जा गर्न पाउँदा म खुसी नै थिएँ । विवाहको दुई वर्षपछि हाम्रो सन्तान भयो । सन्तानको जन्म भएलगत्तै नितेश बिरामी पर्‍यो । उपचारको सिलसिलामा रगत जाँच गराउँदा उसलाई एचआईभी भएको रहेछ । नितेशको यो स्थितिले म पागल भएँ । सुरुमा परिवारले उसलाई एचआईभी सारिस् भनी दोष दिएर मलाई साहै्र दुःख दिए । मेरो रगत जाँचपछि थाहा भयो, ममा भाइरस रहेनछ ।
अब मेरो जीवन के हुने भो ? आमा-बाले भनेका कुरा बल्ल सम्झना भयो- 'भावनामा बगेर गरेको प्रेममा धोका हुनसक्छ । आफू परिपक्व भैसकेपछि मात्र जीवनसाथी रोज्नुपर्छ भन्दा त्यसबेला मैले उहाँहरूलाई शत्रु सम्भिmएँ । उहाँहरूको मनमा चोट पुर्‍याएँ । अब कसरी उहाँहरूसामु यो गल्ती स्वीकार गरूँ ? आजभोलि मनमा नैराश्य र दिक्दारी मात्र छ । आफ्नो जीवन अन्धकार मात्र देख्छु । जीवन किन यस्तो हुन्छ होला ?'
रियाको यो जीवनकथा किशोरावस्थाका केटाकेटीले थाहा पाइराख्नु राम्रो हुन्छ । जीवन किन सोचेजस्तो हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि थाहा पाईराख्नुपर्छ ।
प्रेम गर्नुअघि साँचो वा दिगो प्रेम र काँचो वा आवेगात्मक प्रेमको भेद छुट्टयाउन किशोर-किशोरीहरू नै चलाख हुनुपर्छ । प्रेम र शारीरिक आकर्षणको फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ ।
प्रेम सुन्दर बगैंचा हो भने आवेगको आकर्षण बाघको खोल ओढेको ब्वाँसो जस्तै हो । विपरीत लिङ्गीप्रतिको प्रबल भावना वा आकर्षणको अनुभव आनन्दमय हुन्छ तर आवेगमा आई गरेको प्रेमको परिणाम दुःखदायी हुन्छ । प्रेम गर्नुअघि बाहिरी रूप वा आनीबानी मात्र नहेरी एक-अर्काको भित्री रूप चिन्न आवश्यक हुन्छ । भित्री रूपलाई चिन्नु भनेको उसको इच्छा, विचारधारा एवं जीवनप्रतिको धारणा जान्नु हो । एक-अर्कालाई प्रेम गर्न चाहने केटाकेटीबीच केही समय कुराकानी र छलफल गर्नाले जीवनप्रतिको दृष्टिकोण, एक-अर्काको विचार, भावना तथा पारिवारिक स्थिति रहन-सहन बुझ्न मद्दत मिल्छ । यदि प्रेमी यौन सम्पर्क राख्न आतुर छ भने यसको दुष्परिणाम तत्काल सोच्न सक्नुपर्छ । यी कुरा बुझ्दै जाँदा सम्बन्ध सहज तथा सुखमय हुन्छ भन्ने लाग्छ भने प्रेम सम्बन्धका लागि अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । कुनै कुरा नसोची अन्धकारमा पाइला चाल्दा लडिने सम्भावना हुन्छ ।